Dhito Patra :: “बजारको हल्ला जस्तो तरलताको अभाव विकास बैंकहरुमा छैन” प्रविण बस्नेत
“बजारको हल्ला जस्तो तरलताको अभाव विकास बैंकहरुमा छैन” प्रविण बस्नेत
Interviewee: Mr. Prabin Basnet
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा पनि विकास बैंकहरुमा त्ययसको खासै प्रभाव परेको देखिदैन । वाणिज्य बैंकहरुले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएर कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् तर विकास बैंकहरुले भने धमाधम कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । यसै सन्र्दभमा समग्र विकास बैंकहरुको अवस्था र कामना सेवा विकास बैंकको आगामी रणनीति लगायतका विषयमा कामना सेवा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतसँग बैंकिङ खबर डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदा ब्याजदर उच्च भएको छ । विकास बैंकहरुमा यस्तो अवस्था छैन भनिन्छ । के विकास बैंकहरुमा प्रयाप्त तरलता भएकै हो ?
वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको कुरा केही हद सम्म् सत्य हो । तर यो अवस्था खासगरी वाणिज्य बैंकहरुमा देखिएको हो । विकास बैंकमा यस्तो अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन् । विकास बैंकहरुले ग्रामिण शाखा सञ्जाल, र छरिएर रहेको ग्राहकहरुको बचत रकम तथा निक्षेपमा आधारित कर्जा स्वीकृतिले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव भोग्नु परेको छैन् । यद्यपी वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदरमा उच्च वृद्धि गर्दा विकास बैंकहरुको ब्याजदरलाई पनि प्रभाव पारकेको छ । तर समग्रमा विकास बैंकहरुको स्थिति स्वाभाविक नै रहयो। अन्य विकास बैंक जस्तै हाम्रो कामना सेवा विकास बैंकको Liquidity अवस्था पनि समान्य रहयो । बजारमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव हाम्रो बैंकमा देखिएको छैन् । हामी अहिलेपनि निरन्तर रुपमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार पनि सानो छ । निक्षेपका स्रोतहरुपनि न्यून छन् । रेमिट्यान्सका कारण निक्षेप केही बढेको देखिन्छ । आन्तरिक स्रोतबाट निक्षेप बढाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
खासगरि विकास बैंकहरु समुदायसँग भिजेर काम गर्दै आएका छन् ।
330,642,127 1,083,312 3,369
8,332,118 62,574 229
36,064,711 89,489 232
111,068,636 112,288 796
47,912,373 144,377 456
245,946,726 1,026,140 4,853
67,781 41 2
37,761,721 50,989 422
30,953,191 174,708 602
824,864.39 84,174 33
GILB 1,376 9.992
NMBMF 1,164 8.582
UIC 998 3.42
HURJA 134 3.077
MHNL 102 3.03
SHIVM 560 2.377
SMATA 1,360 2.256
SEOS 10.45 2.25
KNBL 143 2.143
LEMF 8.13 1.88
JOSHI 111 -9.756
HDL 1,666 -7.905
RADHI 164 -6.818
AKPL 192 -6.341
MPFL 224 -6.276
GHL 90 -6.25
GUFL 111 -5.128
API 155 -4.908
OHL 662 -4.748
CORBL 121 -4.724
NBL 48,562,568 336
SHIVM 47,573,271 560
UPPER 37,436,217 275
HDL 25,425,245 1,666
ADBL 21,534,332 425
NCCB 20,771,511 260
PRVU 19,530,624 275
NICA 17,569,256 477
JBNL 16,688,584 209
BOKL 16,548,444 271